ဇန္နဝါရီလ 11, 2019 Denial245
အဆိုပါ 10.0.0.1 ပုဂ္ဂလိက IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာအလွန်ဆင်တူသည် 192.168.1.1 IP Address ကို, နှင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်စားသုံးသူကိရိယာများပေါ်တွင်က default IP address ကိုသို့မဟုတ်အခြားကွန်ရက်ကဟာ့ဒ်ဝဲအဖြစ်အများအပြား router ကိုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်.
အဆိုပါ 10.0.0.1 IP address is normally used in business computer networks and 192.168.1.x IP address is seen in home computer networks.
ဤ, သို့သော်, မည်သည့်ဒုက္ခအောင်မပါဘဲအပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ. သုံးပြီး router များ၏အချို့ဥပမာ 10.0.0.1 သူတို့ရဲ့က default IP address ကိုအဖြစ် IP address ကို Comcast ပေး Xfinity routers နှင့် Cisco သည်အမှတ်တံဆိပ် router များဖြစ်ကြသည်.
10.0.0.1 IP လိပ်စာ သို့မဟုတ် 10.0.0.0.1 IP လိပ်စာ is one of the most used IP for routers. ဒါဟာ Router က admin ရဲ့ panel ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုမယ့်. Router ကို admin ရဲ့ panel ကသို့ logging အားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ router ကို Wi-Fi ကိုစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်, ကွန်ယက်ကိုပြဿနာတွေ troubleshoot, သင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုပိုမိုလုံခြုံစေ, သင့်ရဲ့ DNS ကိုတည်းဖြတ် (Domain Name System), LAN (local area network), proxy settings နှင့်သင့် network ကိုချိတ်ဆက် devices အားလုံးကစောင့်ကြည့်.
ဘယ်လို Login မှ 10.0.0.1?
➥အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ PC မှာမဆို web browser ကိုဖွင့်လှစ်.
➥ထိုအခါကို http ရိုက်ထည့်://10.0.0.1 ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုလိပ်စာဘားနှင့်စာနယ်ဇင်းအတွက် Enter.
➥ Here you can fill out the login details of admin (တနည်း. username နှင့် password). device ကိုများအတွက် default အနေနဲ့ Username နှင့် Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
ငါ့အဆွေခင်ပွန်းသင် Router admin ရဲ့ panel ကမမြင်ရနိုင်လျှင်, သင်ပထမဦးဆုံးမှန်ကန်စွာ IP လိပ်စာကိုရိုက်နှိပ်ကြောင်းသေချာအောင်. Normally 10.0.0.0.1 နှင့် 10.0 0.0 1 are written rather of 10.0.0.1. IP လိပ်စာများဂဏန်းနှင့်ကာလကိုသာပါဝင်သည်, မဟုတ်အက္ခရာများ. သင့် router ၏အုပ်ချုပ်မှု interface ကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ IP လိပ်စာကိုမဟုတ်ပါဘူး 10.0.0.1.
10.0.0.1 router အသုံးပြုသူအမည် & Password ကိုစာရင်း
10.0.0.1 admin ရဲ့ စကားဝှက်ကို
10.0.0.1 admin ရဲ့ admin ရဲ့
10.0.0.1 (ဗလာ) (ဗလာ)
သမျှသောအကြောင်းကိုခဲ့သည် 10.0.0.1 IP ကိုဝင်မည်အဒ်မင်. ငါသည်သင်တို့ကိုဒီ post နဲ့တူယောက်ျားတွေမျှော်လင့်, ဒါပေမယ့်သင်ဤ post ကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါလျှင်, ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား.
ယခင် Post မှ:192.168.2.1 username & Password ကို – 192-168-1-1l.com
next Post:Router ရဲ့ IP Address ကိုရှာပါ